Amazwibela obusuku bokuqala be-DIFF.
I-Durban International Film Festival (i-DIFF), esingathwa yi-Centre for Creative Arts (i-CCA) eKolishi lezesiNtu, yethulwe ngokusemthethweni ngebhayisikobho ebukelwa ezimotweni e-Durban Country Club.
Evula ifestiveli uMqondisi wase-CCA, uDkt Ismail Mahomed uthe: ‘E-Centre for Creative Arts, sikholwa wukuthi amandla obuciko angaqhubeka asenze abantu noma ngabe ubuciko bethulwa endaweni okuhlanganyele abantu kuyona noma enkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe. Ngalesi sikhathi, kudingeka ukuthi sitshale emandleni obuciko kodwa futhi kudingeka ukuthi sithathe emandleni obuciko ngendlela esinika inselelo, esikhuthazayo nesihlomisayo.’ Uzwakalise ukubonga kwakhe kubona bonke abalingani abenze ifestiveli yenzeka.
I-This is not a Burial, but a Resurrection kaLemohang Jeremiah Mosese yiyona filimu evulile. Iwumsebenzi wokusebenzisana phakathi kweNingizimu Afrika, iLesotho ne-Italy kanti lo mdlalo wenzeka ezintabeni zaseLesotho. Umdlalo uvula ngomfelokazi omdala ogama lakhe nguMantoa (u-Mary Twala) elilela indodana yakhe eshonile. Ezimisele ukufa, angcwatshwe nabakubo, izinhlelo zakhe ziphazamiseka uma ezwa ukuthi isigodi sakubo namathuna kuzodilizwa kuthuthiswe abantu ukuze kwakhiwe idamu. Kuyala kuyena ukuthi kuphazanyiswe abalele, uthola amandla amasha okuphila bese kuvuseleleka umoya wokulwa emphakathini wakubo.
INhloko yeziNhlelo, uNks Chipo Zhou, yethula le filimu, okube ngeyokugcina ukuhlonipha umlingisi ongasekho waseNingizimu Afrika u-Mary Twala, ithe: ‘Le ndaba ixoxwe ngesikhathi esifanele, isikhathi lapho umkhankaso wokulwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane udlondlobele khona emhlabeni, ikakhulu eNingizimu Afrika,’ kusho yena. ‘Kusikhuthaza ukuthi sibheke iqhaza labantu besifazane bomdabu entuthukweni ye-Afrika ngokubheka igalelo lomuntu wesifazane oyedwa emphakathini wakubo. Sikhuthazwa ukuthi sinyakaze, silwe, siphokophele kuloko esikholelwa kukona. I-DIFF ikholelwa emandleni ezwi lase-Afrika, ukubungaza izindaba zethu noguquko lokuthuthukiswa kwezizukulwane zangomuso.’
UMqondisi uMosese uzwakalise ithemba lakhe ngokuthi ‘le filimu izokhuthaza abantu ukuthi balwele noma yini abakholelwa kuyona.’
Ngemva kokudlalwa kwefilimu, abenzi befilimu “bashayelwe ihlombe’ ngamahutha, amakhwelo, kwaphayiziswa namalambu ezimoto.
Ifilimu evalile i-Dust izodlalwa eThekwini mhla we-19 kuMandulo ngesikhathi sokwethulwa kwemiklomelo ye-DIFF2020. Amathikithi abiza uR100 imoto iyinye kanti atholakala kwi-Quicket.
Kuzovezwa mahhala amafilimu angama-60, amaqophamlando namafilimu amafishane ku: www.durbanfilmfest.com. Kwiwebhusayithi, ababukeli bangaqasha amafilimu, bathole ithuba lezinsuku ezimbili ukuwabuka. Sinqunywe saba sifishane isikhathi sokuvezwa kwamafilimu kanti kungenzeka amafilimu aphele isaqhubeka ifestiveli. Kuzobuzwa, kuphendulwe imibuzo ehlukene ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe ngesikhathi sefestiveli.